मोडल एम.बि को कारण गायक मौसम गुरुङको प्रेमिका सम्पर्क बिहिन (भिडियो सहित) | Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.
मोडल एम.बि को कारण गायक मौसम गुरुङको प्रेमिका सम्पर्क बिहिन (भिडियो सहित)
Published date : 2018-05-18 Your IP - 54.227.76.180
राजु बोहरा–काठमाडौँ । नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत संगीतको माध्यम बात आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल गायक मौसम गुरुङ सुमधुर स्वर लहरिले सजिएको एक गीत आजै बाट मात्रै डिजिटल बजारमा सार्बजनिक भएको छ । एम.बि गुरुंगको प्रस्तुतिमा रहेको उक्त गीत “सम्पर्क बिहिन” बोलको रहेको छ । आफुले माया गरेको प्रेमिकाबाट नचाहदा नचाहँदै बाध्यता बस टाढा हुन पुगे पछी ति प्रेमिका निकै लामो समय सम्म सम्पर्क बिहिन हुँदा मनमा पैदा भएको संकोचलाई यस गीतले बोलेको छ ।
दिपक बसन्त कार्कीको लय तथा शब्द सृजनाले सजिएको यस गीतको म्युजिक भिडियोमा हाल जापानमा रहेका मोडल एवं गायक एम.बि गुरुङ र सोनु के.सि को रहेको छ । हाल जापानमा रहेको र यो गीत एम.बि गुरुङ कै प्रस्तुतिमा बजारमा आएको हुनाल्रे पनि यो अनुमान लगाउन सकिन्छ कि कतै यस गीतको वास्तविकता प्रस्तुतकर्ता स्वयम् को त होइन ?
दिपक बसन्त कार्कीको निर्देशन बिष्णु बस्नेतको छायांकनमा तयार भएको यस गीतको म्युजिक भिडियोलाई सम्पादन दिपक विस्टले गरेका छन् । यस गीतलाई आवाजको माध्यमबाट सजिसजावट गर्नको लागि गायक मौसमको साथमा अहिलेकी बहुचर्चित गायिका बिष्णु माझीको पनि सुमधुर स्वर सुन्न सकिन्छ ।
तिम्रै तस्बिर आँखैमा झलल भन्दै फेरी आए भरत परियार संगीत पारखिहरुको मन जित्न (भिडियो सहित)
“कृष्ण राई बिन्दासको शब्दमा हिरालाल भोम्जनले दिए भिम लुहार र स्वस्तिका तिम्सिनालाई आँशुको उपहार”